ह’स्तमै’थुन गर्न बढी रुचाउने केटा कि केटी ? - नेपाली खोज
ह’स्तमै’थुन गर्न बढी रुचाउने केटा कि केटी ?
एजेन्सी । ह’स्तमै’थुन किशोरावस्थामा हुने आम यौ’न व्यवहार हो । यद्धपी कतिपयमा यो व्यवहार पाको उमेरसम्म रहने गर्दछ । आफ्नो यौ’न उ’त्तेजना शान्त पार्ने सशक्त, सुरक्षीत र गतिलो माध्यम भएकोले अधिकांश महिला तथा पुरुषले यो व्यवहार रोज्ने गर्दछन् ।
त्यसो त सन्तुलित ह’स्तमै’थुनले शारीरिक तथा मानसिक फाईदा हुने बताइन्छ । तर लत बसिसकेका कतिपयले ह’स्तमै’थुनकार्यमा सिमा नाघेर सहभागी हुनेगर्छन । यसले स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पार्ने विज्ञहरुको दावी छ ।
पुरुष तथा महिला दुबैले आफ्नो यौ’नांङ चलाएर ह’स्तमै’थुनको स्वाद लिने गर्छन् । तर अ’त्यधिक ह’स्तमै’थुनमा लिप्त हुने महिलाहरुमा शा’रीरिक समस्या हुने बताइन्छ ।
भारतमो १४ देख १७ बर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरीमा गरिएको गरिएको राष्ट्रिय सर्वेक्षणले ४८ प्रतिशत केटीहरु र ७३ प्रतिशत केटाहरुले ह’स्तमै’थुन गर्ने गरेको देखाएको छ ।
त्यस्तै २५ देखि २९ बर्ष उमेरका युवाहरुमा गरिएको सर्भेक्षणमा ८५ प्रतिशत महिला र ९४ प्रतिशत पुरुषले ह’स्तमै’थुन गरेको पाइएको छ । त्यसैले केटाहरु बढी ह’स्तमै’थुन गर्छन । यद्धपी केटीहरुको संख्या पनि कम देखिदैन् ।
अ’त्यधिक ह’स्तमै’थुनले महिलामा पर्ने असर
जीवनसाथीसंगको सम्वन्ध : जो महिला अ’त्यधिक ह’स्त’मैथुन गर्छन् उनीहरुको वैवाहिक जीवनमा नकारात्मक हुन् सक्छ । अर्थात श्रीमान्संगको सम्वन्धमा दरार उत्पन्न हुनसक्छ । किनभने ह’स्तमै’थुनको लतमा फसेका महिलाले विहेपछि पनि पतिसंगको यौ’न सम्वन्धमा रोमान्स गर्न रुचाउँदैनन् ।
छटपटी बढ्छ : ह’स्तमै’थुन गर्ने बानी परेका महिलाहरुमा त’नाव तथा चि’डचि’डाहट बढछ । यस्ता महिलाहरुले यदि कुनै कारणबस ह’स्तमै’थुन गर्न नपाए छ’टपटी बढछ ।
हीमेच्युरिया हुनसक्छ : ह’स्तमै’थुन गर्ने महिलाहरुलाई हीमेच्युरिया नामको विरामी हुनसक्छन् । यस्तो विरामी महिलाहरुमा पिसावबाट रगत आउन सक्छ ।
महिनावारीमा गडबढी देखिन सक्छ : नियमित ह’स्तमै’थुन गर्ने महिलामा म’हिनावारीमा ग’डबढी हुनसक्छ । गु’प्तांङमा शुखापन हुनसक्छ ।
त्यस कारण ह’स्तमै’थुन गरेका बेला सावधानी अपनाउनुनै पर्छ ।
नेकांभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व अन्त्य गरिनुपर्छ : नेता महर
डा भट्टराईको टिप्पणी : किन्तुपरन्तु नगरी नागरिकलाई निशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्नैपर्छ